कोरोनाविरुद्धको खोपमा भारतको नयाँ किर्तिमान, सय करोड डोज लगाएको घोषणा
२०७८ मङ्सिर २३ बिहीबार / Thursday, December 9, 2021
काठमाडौँ । भारतमा सय करोड डोज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको छ । विहिबार बिहान सय करोड डोज खोप पुरा गरेर भारतले नयाँ इतिहास बनाएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा एक अपांगता भएका व्यक्ति अरुण रायले खोप लगाएर सय करोड डोज पुरा गरिएको छ ।
गत जनवरी १६ देखि खोप अभियान शुरु गरेको भारतले १३१ दिनको दिन २० करोड डोज लगाएको थियो भने त्यसपछिको ५२ दिनपछि ४० करोड, त्यसपछिको ३९ दिनपछि ६० करोड डोज, त्यसपछिको २४ दिनपछि ८० करोड डोज र त्यसपछिको ३१ दिनमा १०० करोड डोज पुरा गरेको छ ।
भारतमा सय करोड डोज खोप लगाइएको भए पनि कुल जनसंख्याको केवल २० प्रतिशत मात्र दुवै डोज खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै २९ प्रतिशतले एक डोज खोप लगाएका छन् ।
अहिलेसम्मम बेलायतमा ६७ प्रतिशत नागरिकले पुरा डोज खोप लगाएका छन् भने अमेरिकामा ५६ प्रतिशत, चीनमा ७१ प्रतिशत, इटालीमा ७० प्रतिशत, न्यूजील्याण्डमा ५७ प्रतिशत, स्वीडेनमा ६७ प्रतिशतले पुरा डोज खोप लगाएका छन् ।
भारतीय चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) विपिन रावत र उनकी पत्नीसहित १३ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय एयरफोर्सले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावत
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना: सवार १४ मध्ये १३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका १४ जना मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त हेलिकोप्टरमा भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) विपिन रावत र
भारतीय सेना प्रमुखसँगै हेलिकप्टरमा को को सवार थिए ?
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्नेहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त हेलिकोप्टरमा भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) विपिन रावतका साथै उनकी पत्नीसहित १४
काठमाडौँ । भारतको तामिलनाडुमा भारतीय सेनाको हेलीकप्टर दुर्घटना भएको छ । हेलिकप्टरमा भारतीय सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरु रहेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । हेलिकप्टरमा भारतीय सेनाका चिफ अफ स्टाफ विपिन रावत, उनकी
जापानी अर्बपति माइजावा १२ दिनको अन्तरिक्ष यात्रामा
विराट कोहली एकदिवसीय कप्तानबाट बर्खास्त, रोहित शर्मा बने नयाँ कप्तान
कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका कस्तो छ ? कुन दिन के के हुदै छ ?
मस्तिष्कमा ऊर्जा कसरी भर्ने ?
आजको राशिफल: २०७८ साल मंसिर २३ गते बिहीवार
कोरोना आक्रान्तः ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘बुस्टर डोज’ दिने सरकारको निर्णय